QM oo war kasoo saartay dagaallada ka billowday magaalada Muqdisho - Banaadisom
Home Wararka Maanta QM oo war kasoo saartay dagaallada ka billowday magaalada Muqdisho
QM oo war kasoo saartay dagaallada ka billowday magaalada Muqdisho
Muqdisho (Banaadirsom) – Warsaxaafadeed ka soo baxay xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagalladii xalay iyo shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaas oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa kale oo kasoo horjeedo muddo kororsiga.
Ugu horreyn Qaramada Midoobay ayaa cambaareysay rabshadaha kasoo cusboonaaday magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale ay walaac xoogan ka muujisay isku dhacyada u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa daacadda u ah siyaasiyiinta macaaradka ah.
Sidoo kale Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinac inay is xakameeyaan, wax welibana ay ku dhameeyaan wada-hadal iyo deganaan.
“Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya waxay si aad ah uga walaacsan tahay isku dhacyada ka dhacaya magaalada Muqdisho. Waxaan ku boorrinaynaa dhinacyada oo dhan in ay muujiyaan is xakamayn” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Qaramada Midoobay.
Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri “Rabshaddu xal uma ahan is mariwaaga siyaasadeed ee hadda taagan. Waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso ah dib ugu bilaabaan wadahadal degdeg ah,”.
Hadalka kasoo yeeray Qaramada Midoobay ayaa kusoo aadayo, xilli maanta xaaladda Muqdisho ay yare dagan tahay, kadib dagaalladii shalay iyo xalay ka dhacay gudaha caasimada, iyadoo labada dhinac ay weli isku horfadhiyaan goobihii lagu dagaalamay.
ROOBLE oo ku dhowaaqay shir deg deg ah (Daawo)
Daawo: Dibad-bax ka dhan ah Farmaajo oo ka socda qeybo ka mid ah Muqdisho
Daawo: Mid ka mid ah saraakiisha hoggaaminaya ciidamada diidan muddo kororsiga oo hadlay